BGR - - Tele RELAY တစ်ခုသင့်ဒေသခံအီလက်ထရွန်းနစ်စတိုးကနေ $4cable ကိုဝယ်ယူဒါတွေက HDMI ကေဘယ်လ်ကြိုး 40 $ ရှောင်ပါ
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ "ဒီ HDMI ကေဘယ်ကြိုးတွေကိုသင် $4သင့်ဒေသခံအီလက်ထရွန်းနစ် store မှာ $ 40 ကြိုးတွေကိုဝယ်ယူရှောင်ရှား - BGR
BGR - သင့်ဒေသခံအီလက်ထရွန်းနစ်စတိုးကနေ $4cable ကိုဝယ်ယူဒါတွေက HDMI ကေဘယ်လ်ကြိုး 40 $ ရှောင်ပါ
သင့်ဒေသခံအီလက်ထရွန်းနစ်အရောင်းဆိုင်အများပြည်သူမှာခေတ်မီ 30 သို့မဟုတ် 40 $ ဖို့ HDMI cable ကိုဝယ်ယူရှက်ကြောက်စေခြင်းငှါအလျှင်းမရှိပါသည်။ သင်နှင့်သင်ပြီးနောက်များစွာသောလူဖွစျမညျမတိုင်မီဒီအလူအတော်များများမှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သို့သော်သင်သည်ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှကျနော်တို့သေချာအောင်ဒီနေရာမှာဖြစ်ကြသည်။ အသစ်သော HDMI ကေဘယ်လ်ကြိုးလိုအပ်ပါသလား? တစ်ဦး3အထုပ်ကိုရယူပါ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း HDMI ကေဘယ်လ်ကြိုး AmazonBasics သာ $ 12 သည်။ သာ4ဒေါ်လာစျေး cable ကိုသူတို့ 100% အထိအလုပ်လုပ်နှင့်သင့်ဒေသခံကုန်သည် (40 ဒေါ်လာ) ဖြင့်ရောင်းချသူတို့အား!
အမျိုးသားဖို့ HDMI Cable ကိုအမျိုးသား: 3D, အသံပြန်သွား Channel ကိုနှင့်ဗီဒီယို 4K (CRA) Ethernet ကြိုးတွေထောက်ပံ့
တီဗီတွေ, မျက်နှာပြင်, အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်စနစ်များကိုအသံဖမ်းနှင့်ထို့ထက် ပို. ဖို့ Blu-ray player, မီးသတ်တီဗီက Apple TV ကို, PS4, PS3, Xbox One မှာ, Xbox 360, PC များနှင့်အခြားသဟဇာတ devices တွေကို HDMI အတွက် log
အဆိုပါ cable ကိုသငျသညျသီးခြား Ethernet cable ကိုရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲမျိုးစုံ devices များအကြားတစ်ဦးကအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုမျှဝေခွင့်ပြု
(4 Hz, 60p, အရောင်အတိမ်အနက်ကို 2160 နည်းနည်း / px ဗီဒီယို 48K) ကလတ်တလော HDMI နှင့်တွေ့ဆုံ; 18 Gbps အထိတစ် bandwidth ကိုထောက်ခံပါတယ်; အစောပိုင်းဗားရှင်းနဲ့အတူနောက်ပြန်သဟဇာတ
Cable ကိုအရှည်: 1,8 မီတာ (6 ပေ) -3ယူနစ်; တစ်သက်တာအာမခံ AmazonBasics အားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြု
လိုက် Twitter ပေါ်တွင် @BGRDeals စောင့်ရှောက်ဖို့သငျသညျကြှနျုပျတို့အ web ပေါ်မှာတွေ့ပြီနောက်ဆုံးပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အကောင်းဆုံးအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ နှုန်းထားများအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။ BGR ဤဆောင်းပါးကိုတဆင့်ထားရှိအမိန့်အပေါ်တစ်ဦးကော်မရှင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
Image ကိုရင်းမြစ်: Samsung Electronics
BGR - အကြင်သူသည်ဘက်ပေါင်းစုံခဲတံနှင့်အတူ $9မှာဒီတိပ်ခွေကိုအတိုင်းအရှည်ကိုတီထွင်တဲ့ friggin ပါရမီ '' ဖြစ်ပါသည်